CIIDAMADA ITOOBIYA OO DHOOLOTUS KU SAMEEYE JIGJIGA | SOMALISTATE.COM
CIIDAMADA ITOOBIYA OO DHOOLOTUS KU SAMEEYE JIGJIGA
No comments JIGJIGA – Waxaa ilaa shalay ku soo qulqulaye Jigjiga masuuliyiin ay ku jiraan madaxweynaha Itoobiya, taliyaha ciidamada iyo saraakiil badan si ay uga qaybgalaan wax loogu yeedhay xuska maalinta ciidanka.
Madaxweynaha Itoobiya, Mulatu Teshome, ayaa amaan kala dul dhacay ciidanka isaga oo xusay in ilaalinta qaranimada Itoobiya ka sakow, ay ciidanka xaqiijiyeen amaanka wadamada dariska ah. Waxaa uu sii gaar ah u soo qaatay Soomaaliya isaga oo sheegay in ciidamada Itoobiya khasaare xoog leh u geeysteen Alshabaab. Itoobiya ayaa Soomaaliya u dirtay ciidamo tiro badan oo wajiyo kala duwan halkaas ku galay kuna jooga.
Xuska maalinta ciidanka Itoobiya oo sanad kasta la qabto 14-ka bisha February oo maanta Jigjiga ka dhacday ayaa ku soo aaday xilli dalka Soomaaliya weli looga dabaal-dagayo doorashada madaxweyne cusub oo aad dadweynaha Soomaaliya doorashadiisa u soo dhaweeyeen.
Mulatu ayaa bilad gudoonsiiye qaybta 13-aad ee batalyanka 4-aad isaga oo tilmaamay inay guul ka soo hooyeen dagaalkii ay Alshabaab kula galeen tuulada Halgan, Soomaaliya.
Taliyaha ciidamada Itoobiya, Samora Yenus, ayaa dhankiisa ka sheegay in ciidanku fulinyaan waajibaadkooda dasduuriga ah. Waxaa uu intaa ku daray, inay dalka ka difaaceen cadwoga dibada iyo gudaha, gaar ahaan ururada naba-diidka ah.
Mucaaradaka Itoobiya ayaa ku dooda in saraakiisha ugu sareysa ee ciidanka ay hal qoomiyada, Tigreega, u badan tahay taas oo dhawac weyn u geysatay kalsoonida ay shacabku u qabaan.
Wakaalada wararka ee Fana, oo u dhow dawlada, ayaa warbixin ay ka qortay munaasabada aan ku soo qaadin magaca taliayaha qaybta bari ee Itoobiya- jeneraal Abaraha- iyo madaxweynaha DDSI, Cabdi Maxamuud Cumar.
Laakiin warbaahinta DDSI ayaa iyado faahfaahin dheeraad ah ka bixisay munaasabada iyada oo tibaaxday in wasiirka gaashandhiga, wuufud ka socota Jabuuti iyo maamulka Somaliland ay xaflada ka soo qaybgaleen.
Madaxweynaha DDSI ayaa ka hadlay taariikhda gobolka iyo sidii xukuumadii hore ayna ahmiyad u siin jirin gobolka. Waxaa kale oo uu si guud u amaanay ciidamada Itoobiya.
Waa xuskii labaad ee lagu qabto Jigjiga muddo hal bil ah wakhti ay gobolka ka jiraan abaaro aad u xun oo saamayn xoog leh ku yeeshay nolosha bulshada gobolka oo idil, gaar ahaan ta xoolo-dhaqatada. Waxaa jira dad tiro badan u rumaysan in kharashka ku baxaya xafladaha uu wax weyn ka tari lahaa gargaarka loo fidinayo dadka ku tabaaloobay abaaraha.